Red Giant သည် Epic finish ကို Game of Thrones VFX သင်ခန်းစာစီးရီးများ - နဂါးများသို့ဖြန့်ချိလိုက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Cinegy Multiviewer ၁၅.၂: ဘုရင်ကိုကြိုဆိုပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အနီရောင်ဧရာ Thrones VFX သင်ခန်းစာစီးရီး၏ဂိမ်းမှ Epic Finish ကိုဦးလွတ်မြောက်: နဂါး
အနီရောင်ဧရာ Thrones VFX သင်ခန်းစာစီးရီး၏ဂိမ်းမှ Epic Finish ကိုဦးလွတ်မြောက်: နဂါး
လက်ပံ, OR - အောက်တိုဘာလ 3, 2019 - အနီရောင်ဧရာ Thrones ၏ဂိမ်းကနေဆုရအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု recreating ၎င်း၏အထူးထုတ်ဝေသင်ခန်းစာစီးရီး၏စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးအရစ်ကျဖြန့်ချိမယ့်ခဲ့သည်။ စျေးပေါတဲ့လှည့်ကွက်များဇာတ်လမ်းတွဲ 11 ခုနှစ်, Hashi ကြည့်ရှုမည်သို့ပြသ သူတို့ရဲ့ရိုက်ချက်သို့နဂါး add။ နဂါးမီး featuring တဦးတည်းနှင့်များ၏မော်ကွန်းပကျြစီးခွငျးအပါအဝငျ - အနီရောင်ဧရာ tools များအသုံးပြုခြင်း, Hashi နှစ်ခု terrifyingly ကြောက်မက်ဘွယ်နဂါး VFX ရိုက်ချက်များကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံကရှင်းပြသည် သူဖန်တီးဖုတ်ကောင်အလုံးအရင်း ဇာတ်လမ်းတွဲ 10 ၌တည်၏။ ကြည့်ရှုသူများသည်လိမ့်မည် နည်းစနစ်တန်ချိန်သင်ယူ 3D ကာတွန်းထဲမှာ, ကင်မရာခြေရာခံခြင်း, အရာဝတ္ထုကိုအစားထိုး, နှိပ်ရင်တွေ့နိုင်တယ်, ဖွဲ့စည်းမှု, အရောင် correction နှင့်အများကြီးပို။
အခုတော့ Watch: သင့်ရဲ့ Shot တစ်ဦးနဂါး Add - Thrones VFX အပိုင်း4၏ဂိမ်း
အနီရောင်ဧရာမှ: "ဂရိတ်သတင်း! ကျနော်တို့ Thrones ၏ဂိမ်း VFX ဆိတ်ကွယ်ရာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် tutorials, ယခုအပတ်ကျနော်တို့ (Aerys II ကို Targaryen ခေါ်ရူးသွပ်ဘုရင်ကရူးကဲ့သို့) အရူးတာပေါ့ကျနော်တို့ချိုမြိန်, သင်ချိုမြိန်၏ဒုတိယ Help ပေးခြင်းနေမှုတ်သွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးပေါတဲ့လှည့်ကွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်နေစဉ် သင်ယူခြင်း! ဒီတော့ Westeros အတွက်တဦးတည်းနောက်ဆုံးစွန့်စားမှုတက်သည်ဂီယာ။ ကျနော်တို့ကပြပွဲထက်ပိုကောင်းတဲ့အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ကတိပေး။ "
စိတျအပိုငျးစျေးပေါတဲ့လှည့်ကွက် Thrones VFX ၏ဂိမ်းသုံးခုကတဆင့်တဦးတည်းထွက်စစျဆေးဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့:
အပိုင်းတစ်: အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် Firebolt ခုနှစ်တွင်သို့ကာစ်ရန်ကဘယ်လို
အပိုင်းနှစ်: တစ်ဦးက Zombified မြင်း Creating
အပိုင်းသုံး: တစ်ဖုတ်ကောင် Horde တိုက်ပွဲရှုခင်း Creating
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Hashi နီဧရာမှအောက်ပါ tools တွေကိုအသုံးပြုသည်:
VFX Primatte Keyer 6: Primatte Keyer အစာရှောင်ခြင်း, အလိုအလျှောက် chroma-နှိပ်ရင်တွေ့နိုင်များအတွက်အစွမ်းထက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်အပြာရောင် screen ကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေ, Primatte Keyer ရဲ့ Auto-Compute algorithms မကြာခဏအသစ်တခု user interface ကိုအတူအလိုအလျောက်စုံလင်သောသော့ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်နောက်ခံနဲ့ foreground ကို select နှင့်ခွဲခြားရန်လွယ်ကူအောင်ရေးကိရိယာများကို clean up နိုင်ပါတယ်။
VFX Supercomp: Supercomp ရှုပ်ထွေးသော, ချောမွေ့စွာဖွဲ့စည်းမှုကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူစေသည်တစ်ခုဖွဲ့စည်းမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Supercomp မှာတော့အလင်းနှင့်လေထုသက်ရောက်မှုဝေးသောပိုပြီးသဘာဝအလမ်း၌၎င်း, ဝေးလျော့နည်းအရင်ကထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်အတွက် Pre-ရေးသားခြင်းနှင့်အတူအားလုံးအလွှာနှင့်တစ်ဦးမြင်ကွင်းတစ်ခု၏ဒြပ်စင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်။
VFX ရိပ်: အရိပ်နူးညံ့မှု, ကွေး, အရှည်, အရောင်နဲ့တခြားအဘို့ options များနှင့်အတူ၎င်း၏ alpha channel, အရောင်အဝါနှင့်ပိုပြီးပေါ်တွင်အခြေပြုနေတဲ့အလွှာသို့မဟုတ်နောက်ကွယ်မှရှေ့တွင်တစ်ဦးရှုထောင့်အရိပ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကစူပါလွယ်ကူပါတယ်စေသည်ပြီးနောက်သက်ရောက်မှုများအတွက် plugin ကိုဖြစ်ပါတယ် ဂုဏ်သတ္တိများ။
VFX Reflection: Reflection နူးညံ့မှု, အကွာအဝေးမှိန်, အရှည်နှင့်ပိုပြီးအဘို့အထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, သင့်အလွှာတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့ကလွယ်ကူစေသည်ပြီးနောက်သက်ရောက်မှုများအတွက် plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်။
VFX ဘုရင်ကပင် Tracker: ဘုရင်ကပင် Tracker ကရိုးရှင်းပြီးသူတို့ရိုးရှင်းသောစတုဂံမဟုတ်ရင်တောင်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်သို့ဆိုင်းဘုတ်များသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုနေရာစေသည်။ သူတို့ကခငျြနေရာတိုင်းမှာနှင့် "မှသည်" တံသင်, ပြိုအာကာသအတွင်း offset နှင့်လှည့်နိုင်စွမ်း "ရန်" အစွမ်းထက်နှင့်အတူ, အနုပညာရှင်များ, သူတို့လိုချင်တဲ့သမျှ pin နိုင်ပါတယ်။
Trapcode Mir 3: Trapcode Mir သင့်ရဲ့ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်အတွက်အသုံးပြုရန်မျက်နှာပြင်များ, အဆုံးမဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, အနေအထားနှင့် 3D အရာဝတ္ထုစီးဆင်းဖန်တီးအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်များအတွက် plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်သွင်းကုန် 3D OBJ & Models များအတွက်မျက်နှာပြင်များနှင့်စိတ္တဇပုံစံမျိုးစုံစီးဆင်းဒီဇိုင်း။
မှော် Bullet ကိုကြည့်: ကို Magic Bullet ကြည့် 200 ကျော်အပြည့်အဝ-စိတ်ကြိုက်မျှော်ရလာဒ်ကဒိနှင့် New Look စိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ်တည်ဆောက်ရန် 40 tools တွေကိုကျော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးအစွမ်းထက်ရူပနှင့်အရောင်ဆုံးမခြင်းပေးရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအများစု-အလိုလိုသိအရောင်ဆုံးမခြင်းအတွေ့အကြုံကိုရယူပါ။
မှော် Bullet Colorista IV: ကို Magic Bullet Colorista IV Pro နဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ပတ်ဝန်းကျင်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ကို Adobe Premiere လှညျ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်ဆုံးမခြင်းပေးပါသည်။
မှော် Bullet Mojo II ကို: Mojo ရိုက်ကူးစက္ကန့်အတွင်းရုပ်ရှင်အရောင်တန်းပေးသည်။ ပေါ်လွင်နှင့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အသားအရေတန်ချိန်, သင့်နောက်ခံနှင့်ပိုပြီးချွတ်အအေး။
အနီရောင်ဧရာဠာ: GPU ကိုအရှိန်မြှင့်သောဗီဒီယိုသက်ရောက်မှုများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအဆိုကိုဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်များနှင့်အယ်ဒီတာများအဘို့အ Plugins ရဲ့အနီရောင်ဧရာရဲ့စုဆောင်းခြင်း, ဠာရှစ်အိမ်ရှင်-applications များအနှံ့ထောက်ခံ 80 tools တွေကိုကျော်ပါတယ်။
တစ်ဦးမီဒီယာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Kit သို့မဟုတ် Briefing ကိုတောင်းဆို
မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များနီဧရာထံမှမဆိုတစ်ဦးချင်းစီ tools များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အစုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ကိရိယာအစုံတစ်ခုသို့မဟုတ်အနီရောင်ဧရာအလုပ်အမှုဆောင်နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်တောင်းဆိုရန်မှာနစ်ခ် Govoni ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
အနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, အယ်ဒီတာများ, VFX အနုပညာရှင်နှင့်ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်နာများများအတွက်ထူးခြားသော tools တွေကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းသူကိုပါရမီအနုပညာရှင်နှင့်နည်းပညာသမား၏ဖွင့်လုပ်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုအလုပ်နှင့်ဘဝအကြားချိန်ခွင်လျှာရှာဖွေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ် - ကြှနျုပျတို့သညျ "နှစ်ဆအောက်ဆုံးလိုင်းက" မခေါ် - ဤအတွေးအခေါ်ကုမ္ပဏီကြီးရလဒ်များကိုသီးကိုသီးသောရိုးရှင်းသော tools များတည်ဆောက်ခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက်ရှုပ်ထွေးလျစ်လျူရှုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, (ကို Magic Bullet, Trapcode, ဠာနှင့် PluralEyes လိုမျိုး) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်စံဖြစ်လာနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လွှင့်ကြသည်။ 200,000 အသုံးပြုသူများကိုကျော်နှင့်အတူပြုလုပ်အသုံးပြုမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုမြင်နေခြင်းမရှိဘဲတီဗီ၏ 20 မိနစ်စောင့်ကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်ပါပဲ။ အနုပညာရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သောကြောင့်အတွေ့အကြုံများကနေကျနော်တို့အနုပညာရှင်တွေများအတွက် tools များရှိသောလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာဖို့မသာပုံစံမျိုးရယူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင် Watch 200 အခမဲ့လဲ tutorial ကျော်ထံမှလေ့လာသင်ယူ, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုကြိုးစားပြီး www.redgiant.com.
Zazil Media ကနောက်ဆုံးရပို့စ်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြယ်ပွင့်များသည်ဂန္ထဝင်မက္ကဆီကန်ရုပ်ရှင်များပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် Cintel Scanner ကိုမှီခိုသည် - သြဂုတ်လ 6, 2020
OS Studios သည် Black Berry ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ UC Berkeley အတွက် Minecraft တွင် Virtual Graduate ဖန်တီးရန်ကူညီသည် - ဇူလိုင်လ 31, 2020
Blackmagic Design မှ ATEM Streaming Bridge အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 30, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ။ အနီရောင်ဧရာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို က Ultra HD ဖိုရမ် VFX ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-10-04
ယခင်: ခေတ်ပြိုင်သုတေသနရဲ့အသစ်လွင်ဆုံးဒီကုဒ်ဒါ / Controller ဒီကုဒ်ဒါ IPTV Streams သည်ပြီးပြည့်စုံသော Is
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့် Pix ယင်း၏နောက်မျိုးဆက်ဝေးလံခေါင်သီဖြေရှင်းချက်ပါဝါမှ Medialooks MFormats နှင့် WebRTC ရွေးကောက်